Abesifazane abahlanu abangavamile kakhulu emhlabeni
Wonke owesifazane unhle futhi unhle ngendlela yakhe, kodwa kukhona abesifazane abafisa futhi bajabule ngesikhathi esifanayo. Ezinye zazo zihlukile kusukela ekuzalweni, abanye baye bafinyelela ngokuqondile lokhu kubukeka. Sikunikeza i-TOP-5 yabesifazane abangavamile kakhulu emhlabeni wethu.
Uma ubheka izithombe zikaValeria okokuqala, awukwazi ukuqonda ngokushesha ukuthi ubani ongaphambi kwethu: intombazane enhle kakhulu noma udokotela "Barbie". Futhi nakuba lokhu kuqhathaniswa nentombazane yadonsa akuthandi, awukwazi ukuphika ukufana okusobala phakathi kwabo. Ngokusho kukaValeria, ukuze athole ukuvumelana nomzimba wakhe, wenza ukuhlinzwa okulodwa nje epulasitiki - wandisa amabele akhe. Kodwa odokotela abahlinzeka emhlabeni bathi bangaphambene nalokhu: baphinde badideke ngempumuzo enhle yentombazane futhi 47-sentimeter "isp waist". U-Lukyanova uqobo ngokwakhe uveza ukuthi "Uthatha 21" - isidalwa esinamandla esivela emzimbeni wangaphandle esakhiwe emzimbeni womuntu. Le ntombazane ingumfundisi ongokomoya, ophakathi nendawo, futhi ithi uyakwazi ukulawula izakhi ezine. Kodwa kulo mdlalo wokuzilibazisa u-Valerie akapheli: ngombono ungumculi, empilweni wakwazi ukuzibonakalisa njengomculi, imodeli, umqeqeshi wezempilo, umlobi nomlobi osemuva kwezincwadi zakhe ezibhalwe ezi-6 kuma-esoterics.
U-Aneta wazalwa ngo-1982 ePoland, kanti intombazane engavamile ingabizwa okungenani ngoba inamandla amakhulu emzimbeni, okungeke nje kucatshangelwe ngokobulili obuvamile. Ngemva kokuqala amageyimu kusukela eneminyaka engu-16, u-Aneta wazuza irekhodi lakhe siqu: wavusa igobolondo enesisindo esingamakhilogremu angu-500. Le ntombazane inamarekhodi angavamile kakhulu: yakwazi ukuphakamisa amadoda angu-12 ngaphezulu kwekhanda lakhe emizuzwini emibili nje, futhi waphonsa amaphoyinti okwesikhashana - amaphini awu-5 ngomzuzu owodwa. Yonke imiphumela ye-Anet yangena ku-Guinness Book of Records.
U-Julia Gnusse, owaziwa phansi ngaphansi kwegama elithi "The Illustrated Lady", ubhalwe ohlwini lweGuinness Book of Records njengomnikazi wezinombolo ezinkulu kunazo zonke emzimbeni: isikhumba sika-95% sesikhumba siphethwe ngama-tattoos. Kodwa-ke, le ntombazane ayizange ilwele ukuphumelela okunjalo: izidakamizwa zakhe zinemlando yazo, kunalokho edabukisayo. UJulia waqala ukuthuthukiswa kwesifo esingavamile lapho eneminyaka engama-30, ngenxa yalokho isikhumba somuntu sishaywa luvalo uma sithola ilanga. Ngemva kwesikhashana, izibhansela zakhiwe emzimbeni wentombazane evela kumabhalane. Kwakudingeka aphendule abahlinzayo abahlinzeka nge-plastic, kodwa ngisho bengenamandla kuJulia - khona-ke le ntombazane yafika nomqondo wokufihla ukungapheleli kwayo ngemuva kwezithombe. Ngenkathi yokufihla izibazi ngemuva kwemidwebo, uJulia wathwala kangangokuthi kamuva wachaza cishe umzimba wakhe wonke, kubandakanya ubuso bakhe nezindawo ezingahloselwe yisifo. Ngakho-ke, intombazane yaqeda inkimbinkimbi yakhe futhi yaba umnikazi wezithombe ezingaphezu kuka-400 emzimbeni wakhe.
UJotie Amji, ozalelwa futhi ehlala eNdiya, ubhalwe ohlwini lweRekhodi yamaRekhodi njengendodakazi enesisindo esiphansi. Ngesikhathi sobuningi, ukuphakama kwentombazane kwakungamamitha angu-62.8 kuphela okulinganiselwa ku-5.2 kilogremu - kwaba ngosuku lwakhe lokuzalwa ukuthi irekhodi lakhe lirekhodiwe eNcwadini yeGuinness. Kodwa-ke, ukukhula okuncane kuJoti kungenasizathu: imbangela yakhe i-achondroplasia - isifo esiyinkimbinkimbi yefa. Naphezu kwazo zonke izinkinga, le ntombazane isemabhayisikobho futhi iphila impilo ejabulisayo.
Ukukhula kwalolu ntombazane kufinyelela kumamitha amabili (206 cm), futhi kubhekwa ngokufanele ukuthi intombazane ende kunazo zonke emhlabeni. Ngenxa yokukhula kwakhe okukhulu, u-Elisani wayefanele ngisho nokushiya esikoleni, kodwa intombazane ayifuni ithemba: ufuna ukuba yisibonelo, okubonakalayo ngokubonakala kwakhe okungavamile. Kodwa-ke, imithi ikholelwa ukuthi ukukhula kuka-Elisani kubangelwa ukugula okungathí sina, ngenxa yokuthi uzobe ephakeme kakhulu, kanti impilo yentombazane esikhathini esizayo iyoba yingozi kakhulu.
UMsombuluko we-Cyber ​​yisikhathi esihle kakhulu sokuthengwa kwe-intanethi
Uma umuntu eyeka uthando, indlela aziphatha ngayo
Lokho amadoda akujabulela kowesifazane: izimfanelo ezingu-4 ongazi
Ikhalenda lezinwele kanye nezinzipho ze-Lunar ezikhishwa ngoMashi 2018: amatafula abonisa izinsuku ezihle
Kuzoba yini ngonyaka ka-2018 weRashiya: imibono yophiko kanye nabaqaphi
Iwashi lezinto eziphilayo
Ukudla okusheshayo nenkukhu
Ngingadla i-caviar ebomvu kubesifazane abakhulelwe?
Ngifuna ukubuyisa umthandi wami
I-Horoscope ye-Lion-Woman ngo-March 2017
Ukuphumula kwezingane zasenkulisa
Izici ze-make-up ebusika
Ukuguqulwa kwe-Feng Shui: izinkomba kanye nezakhi
U-Leonard Huxley, u-biography
Amajusi wemvelo, ukudla kwejusi
Imithetho eyi-10 yokunakekelwa komlomo ebusika
Sibuyekeza ikhabethe: i-TOP-3 imidwebo yemifashini-2017
Ubumnene nothando lomntwana omncane